Ofiin ofitti heerumuufi cidha sobaa Yugaandaa duuba maaltu jira? - BBC News Afaan Oromoo
Ofiin ofitti heerumuufi cidha sobaa Yugaandaa duuba maaltu jira?
29 Onkololeessa 2018
Madda suuraa, Lulu Jemimah
Dubartiin sagantaa raadiyoo dhiyeessitu hedduu uummata biratti beekamtuu taate, dubartii biraa akka heerumtuuf dhiibbaa irra ga'aa jiruuf qophii maallaqa walitti qabuu taasisaa jirti.
Maallaqni walitti qabamu kunis dubartiin akka heerumtuuf dhiibbaan irra ga'aa jiru akka kaffaltii barnoota yunivarsiitiif itti gargaaramtuuf jedhameera.
Sagantaan maallaqa walitti qabuuf dhiyeessituun raadiyoo kun taasifte garuu namoota hedduu ajaa'ibeera.
Dubartii kubbaa miillaan heeruma ijoollummaa akka hafu godhaa jirtu
Misirroo kaadhimaan guyyaa cidhaa dursee jalaa du'e sirna cidhaa raawwatte
Bara goolii diimaatti cidha ufannaa adii
Dubartiin sagantaa raadiyoo dhiyeessuun Yugaandaa keessatti beekamtuu taate kun Jimaata dhufu isa sobaa hiriyyaasheetti heerumuuf.
Namoonni cidha kana irratti hirmaatan garuu kaffaltaadhaan galanii cidha kana hirmaatu.
Kun kan ta'uuf ammoo cidhi qabame kun maallaqa walitti qabuudhaan intalli Yugaandaa barreessuun beekamtu maqaan ishee Luuluu Jamiimhaa jedhamtu Yunvarsiitii Oksifoordi akka deemuu dandeessuuf jedhameeti.
Intalli ganna 32 taate Luuluun ammoo yeroo darbe uffata cidhaa veeloo adiin faayamtee "ofiin ofitti heerumuu" isheetiin hedduu haasa'amaa tureera.
Akka jettetti, jireenya gaa'elaatti seenee qabamee taa'uurra barumsa koo itti fufee barachuun filatamadha.
Ibsa waa'ee viidiyoo,
Dubartii kubbaa millaan heeruma ijoollummaa akka hafu godhaa jirtu
Maaliif ofiin ofitti heerumte?
"Yeroo umuriin ofii waggaa 21 ykn 22 ga'u namoonni yoom akka ati heerumtu si gaafachuu jalqabu, " jechuudhaan BBC Newsday'tti himte. "Anaaf waanta hedduun ani hojjechuun narra jiru-akka digirikoo barachuutu na eeggata."
Luuluun akka jettutti haati ishee akka isheen abbaa manaa gaarii argattu yeroo hundaa Waaqa kadhatti, abbaan ishee ammoo yeroo isheen waggaa 16 taatu irraa kaasee haasawaa cidhakoo irratti taasisu hanga qopheeffachuutti ga'eera.
Dhiibbaan akka heerumnuu maatiitiin ala namoota diidaa irraallee ni dhufa jetti.
"Namoonni baayyeen biyya alaatti namoota hedduu waliin walarguu dandeessa. Garuu namoonni ati argitu kun kan akkamii ta'u? Maaliif asitti nama ta'e waliin walbartee/gaa'ela ijaartee hin deemtu," naan jedhu jetti.
Kana qalbiitti qabachuudhaan Luuluun ofiin akka ofiisheetti heerumtu murteessite.
Luuluun cidha ofiin ofitti heerumte kanaan maallaqa dolaara 12, 000 barumsa ishee gargaarsa tokko malee of dandeessee barattu maddisiifachuus barbaaddee ture.
Cidhi lammaffaa sobaa kun maaliif barbaachise?
Oduun dhiyeessituu raadiyoo beekamtuu Siimaa K K Sabiitii hiriyyaa ishee Bernaard Mukaasaa waliin cidha godannee namoota hedduu waamna jedhamu dhaga'amee hedduu haasa'ame.
"Gaaffiin yeroo baayyee gara keenya dhufaa ture, cidha kana yoom maatii keessaniin geessu kan jedhu ture," jechuun BBC'tti himte Sabiitiin.
Taateewwan kun akka cidhi guddaan qophaa'ee tikeetiin ittiin cidha sana seenan gurguramuun maallaqni Luuluu Jamiimaan Maastersi Digirii ishee dandeettii barreessuu kalaqaa Yunvarsiitii Oksifoordii kan UK'tti argamu deemtee barattu gargaaru qophaa'u taaseera.
"Waan addaa hojjechuuf abdii qabna, dinagdee shilingii Yugaandaa keessa jiraanna, Luuluun garuu kaffaltaa barumsa isheef ta'u paawondiidhaan walitti qabatteetti.
Ani baayyee waan gaariitu natti dhaga'ama sababiin isaas waan barumsa ishee xumursiisuu dandeessisu walitti qabuu keessatti gumaachuu dandeenyeerra," jechuun BBC'tti himteetti Sabiitii.
"Ijoolleen durbaa hedduun dhiibbaa hawwaasaatiif harka hin kennan. Warri akka Luuluu barumsa isaanii itti fufanii baratu ykn hojii isaanii irratti xiyyeeffatu akkasumas osoo gaa'elaan hin qabamiin hojii ofii jalqabatu," jetteetti.
"Suuta suutaan ta'aa jira garuu namoonni caalaa fudhachuu jiru."
7 Hagayya 2018
Cidha uffannaa adii bara goolii diimaa Itoophiyaa keessa
26 Guraandhala 2018
Shamarran Chibook: Yaadannoo shamarran to'annaa Bookoo Haraam jala yeroo turanitti katabame
Mootummaan Itoophiyaa 'gaaffii TPLF waliin mari'adhaa jedhu gonkumaa hinfudhatu'
18 Caamsaa 2021
Guyyaan filannoo dheereeffamuu Izeemaafi Baaldaraas maal jedhan?
Dhaabbanni gargaarsaa Ameerikaa Itoophiyaatti yaaddoon beelaa jiraachuu hime
Qondaala godinaa dabalatee namoonni shan Wallagga Lixaatti ajjeefaman
17 Caamsaa 2021
Itoophiyaatti tajaajilli Facebook adda citee ture deebi'uu Itiyoo Telekoom hime
Hidhattoonni WBO lammiilee Chaayinaa sadii 'to'annoo jala oolchan'
16 Caamsaa 2021
'Dahoo miidhaa gannaarraa nu hambisu waan hinqabneef dhufaatiin gannaa nu yaaddessa'
'Filannoon biyyaaleessaa torban 2-3'n boodatti harkifachuu danda'a'
15 Caamsaa 2021
'Takkaa maqaansaa sababa kanaan dha'amee hinbeeku '- Abbaa Amaanu'eel
14 Caamsaa 2021
Biqilaafi Lalisaa - obbolaa lamaan 'Xiyyaara Oromiyaa' hojjatanii balaliisuu yaalan
13 Caamsaa 2021
Bullaallaan walgahii gidduutti mataa maanguddoorra qubatte ijoo dubbii taate
Lafee cinaachaa baasuu hanga gaanfa tolfachuutti- gatii bareedinaaf kanfalamu
Galiin Baayidan argataniifi gibira kanfalan barame
Firaansitti dubartoonni saala jijjiirratan raagbii akka taphatan heeyyamameef
Daareektarri Olaanaan WHO haalli Tigraay keessaa 'sukkaneessaadha' jedhan
Lolli Israa'el fi Paalistaayin akka dhaabbatu Joo Baayidan gaafatan
Waggaa 32n dura guyyaa itti Koloneel Mangistu irratti fonqolchi yaalame ture maal yaadatu?
Yeroo dhuma kan haaromfame: 16 Caamsaa 2019